UN ga-achọta Sarin na Syria? - Ụwa 2022
UN ga-achọta Sarin na Syria?
N'izu gara aga, White House kwupụtara na ha nwere ihe akaebe nke ngwa agha kemịkalụ n'ime Syria, nke kwughachiri akụkọ sitere na Britain, France na Israel [njikọ]
Otú ọ dị, Onyeisi ahụ enyeghị ọtụtụ ihe n'ụzọ nkọwa. "Anyị amaghị ka esi eji ha eme ihe, mgbe ejiri ha, ma ọ bụ onye ji ha mee ihe," ka President Obama gwara ndị nta akụkọ.
Enweghị nghọta doro anya - na ijide n'aka maka nke ahụ - adịghị mma. Ndị White House na ndị isi ụwa ndị ọzọ na-echegbu onwe ha na a gaferela "akara uhie" na Syria, na ngwa agha kemịkal nwere ike ịdaba n'aka ndị otu na-eyi ọha egwu na mpaghara ahụ, dị ka Hezzbollah. Na ngwụsị izu, Israel gbagburu ụlọ ọrụ nyocha ndị agha a na-enyo enyo na ndị agha ngwa agha na-esi Syria na-aga Lebanọn.
Ka ọ dị ugbu a, ihe ọmụma anyị gbasara iji agha kemịkal agha Siria na-abụkarị ntule ugbu a.
Ihe ka ọtụtụ n'ime akụkọ a na-enyo enyo na sarin, ikuku nerve nke na-emechi usoro iku ume, bụ ihe na-emepụta kemịkalụ na March nke dị nso na obodo Aleppo, mgbe ebubo ndị a malitere. Mgbe etinyere ngwa agha n'ime mmiri mmiri na-efesa (aerosol), sarin nwere ike ikuru ma ọ bụ banye n'ime akpụkpọ ahụ na anya n'ime nkeji ole na ole.
"Ụfọdụ n'ime mgbaàmà ndị anyị na-ahụ [na vidiyo nke ọgụ Aleppo] kwekọrọ na ikpughe ihe na-ahụ maka akwara dị ka sarin," ka ọkachamara n'ịlụ agha n'ihe banyere ihe ndị dị ndụ Gregory Koblenz gwara VOA. Mana "naanị vidiyo ndị ahụ anaghị enye ozi zuru oke na ọnọdụ iji nyochaa ihe mere ndị a."
Ndị ọrụ nyocha gbasara ikike mmadụ nke United Nations enwetala akaebe onye mbụ na-akwado enyo ndị a. Agbanyeghị, ndị nyocha ahụ na-ekwu na akụkọ ha enweghị ike ịbụ “nchọpụta nkwubi okwu”.
Ihe nlele ọbara sitere n'aka ndị mwakpo Aleppo metụtara bụ ihe dị mma maka nsị sarin, dịka WIRED siri kwuo, mana ọtụtụ na-arụrịta ụka banyere ngosipụta nke ụdị. N'izu gara aga, Guardian kọrọ na ajụjụ ọhụrụ apụtala "n'etiti ihe na-ekwekọghị ekwekọ n'etiti ihe ndekọ ndị hụrụ anya na-akọwa otu n'ime mwakpo na nkọwa akwụkwọ ọgụgụ nke ngwa agha." Ọzọkwa, a na-ekwu na ọ bụghị ihe nlele sarin niile sitere na Aleppo.
Òtù Mba Ndị Dị n'Otu chọrọ ime nyocha nke ya banyere ala na ọbara, mana ọ chọrọ ịnweta mpaghara ndị ezubere iche. Ndị ọchịchị Siria na-ajụ ohere a. Na elekere na-akụ.
Ozugbo sarin rutere n'ọbara, nsị ahụ na-ebibi enzyme - acetylcholinesterase - nke na-arụ ọrụ dị ka ihe nkwụsị maka nkwụsị anụ ahụ. Ọ bụrụ na enweghị mgbanworị a, mọzụlụ dị na ngụgụ na-emecha gwụ ike ruo n'ókè nke ịda ada, mmadụ na-atakwa ụra.
Enwere oke oge maka mgbe ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike ịchọpụta mgbanwe dị na acetylcholinesterase. Ọbara ọbara nke enzyme a nwere ike n'ọnọdụ ụfọdụ dị ka ihe na-egosi nsị, ma ọ bụrụ na ọtụtụ ụbọchị agafeela, ihe nlele sitere na ndị lanarịrịnụ nwere ike ịbụ nke na-adịghị agwụ agwụ, ka ọkachamara n'ịlụ agha kemịkal Dr. Christopher P. Holstege, Onye isi nke Medical Toxicology na Mahadum University kwuru. Ụlọ Akwụkwọ Ọgwụ nke Virginia.
N'aka nke ọzọ, ndị na-enyocha nwere ụbọchị ole na ole ọzọ iji chọpụta ihe ndị na-emepụta mgbe ahụ na-akụda ihe na-emepụta kemịkal - 'sarin metabolites', dị ka ọ dị maka nyocha ụlọ ọgwụ nke 1995 sarin ọgụ nke usoro ụgbọ oloko Tokyo.
"Dịka ọmụmaatụ, na mwakpo ụgbọ oloko Tokyo, akụkọ na-edepụta na a na-achọpụta sarin metabolites na mmamịrị ruo otu izu mgbe ekpughere ya," Holstege kwuru, mana ọ dị mkpa ka ikpughe elu dị elu iji gbasaa windo nchọpụta.
Dr. Holstege enyerela ndị mmanye iwu aka na nyocha ụlọ ọgwụ gbasara nsị ma dee akwụkwọ yana ọtụtụ akwụkwọ na isiokwu ahụ. Ọ gwara Medical Daily na na nyocha dị ka nke a, a na-enwekarị otu ndị ọkachamara 3 na-enyocha ebubo ndị a:
1. Ndị dọkịta toxicologists ga-anakọta ndekọ ahụike ma gbaa ndị ọrịa ajụjụ ọnụ na mgbaàmà ha.
2. Ndị na-ahụ maka toxicologists nyocha ga-anwale ihe nlele mmadụ maka ọnụnọ nke ngwa agha.
3. Otu nke atọ nke ndị ọkà mmụta sayensị "ga-anakọta ma mesịa nyefee ihe nlele gburugburu ebe obibi maka ule, dị ka ala, uwe ekpuchiri, wdg."
Ndụ shelf maka sarin na ihe atụ gburugburu ebe obibi dịgasị iche iche 3 site na izu ruo ọnwa - dabere na ịdị ọcha nke ngwakọta ngwa agha, nke mere onye isi UN ji na-agba gọọmentị Syria ume ka ndị nyocha ya bata na mba ahụ.
"Ka anyị na-ekwu maka ebubo ndị a," odeakwụkwọ ukwu Ban Ki-moon kwuru, "Ana m agba ndị niile metụtara ume ịkwado ọrụ ha n'inyere anyị aka ijide ngwa agha ndị a jọgburu onwe ya nke oke mbibi," dịka AP siri kwuo.
Ekwuputala oke erighị ihe na-edozi ahụ na Madaya nke Syria
Ego UN na-ahụ maka ụmụaka bụ UNICEF na Fraịde kwuputara ikpe na-esighi ike n'etiti ụmụaka na obodo Madaya nke Syria gbara gburugburu
Cholera na-agbasa site na Iraq ruo Syria, Kuwait, Bahrain: UNICEF
Ọrịa ọgbụgbọ ọgbụgbọ na Iraq agbasawo na mba ndị gbara agbata obi, na ihe egwu na-atụgharị ghọọ ọrịa na-efe efe na mpaghara ka ọtụtụ nde ndị njem ala nsọ na-akwado ileta obodo ahụ
Gọọmentị Syria ewepụrụ mpaghara ndị nnupụisi na-ejide, Deir Al-Zour, Site na mkpọsa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa Polio 2012
N'oge mkpọsa mgbochi ọrịa polio na 2012 na Syria, gọọmentị wepụrụ mpaghara ndị nnupụisi na-enwe na ịgba ọgwụ mgbochi kwesịrị ekwesị
Polio na-agbasa na Syria, mana ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-egbochi mbọ ịgba ọgwụ mgbochi ịga n'ihu
N'agbanyeghị nkwa gọọmentị Siria kwere ịgba ọgwụ mgbochi ụmụaka niile na-erubeghị afọ 5, mbọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa akwụsịla n'ihi nsogbu agha
Ekwupụtala ikpe ọhụrụ abụọ nke Syria Polio na nso Damaskọs na Aleppo, steeti WHO
Ekwuputala ọrịa polio ọhụrụ abụọ na Syria, ma nso obodo ukwu